စိတ်အမောပြေ: သစ္စာရှိပါ၊ လိင်ကိစ္စကို ဆင်ခြင်ပါ
လူဆိုးကြီး ၏ စိတ်အမောပြ
[လူဆိုးကြီး ၏ ကိုယ် ပိုင် မှတ် စု လေး တစ် ခု မျှ သာ ဖြစ် ပါ သည် ။ မိ မိ နှင့် ၀ါ သ နာ တူ သူ များ အ လွယ် တ ကူ ဖတ် လို့ရ ကြည့် လို့ ရ အောင် စု စည်း ပေး ထား ပါ သည် ။ မှတ် စု ဖြစ် လေ တော့ အ ဟောင်း ရော အ သစ် ပါ ကိုယ် ကြိုက် တာ ကိုယ် စု ဆောင်း ပြီး တင် ထား ခြင်း ဖြစ် သည် ။ ကြည့် သူ က သာ လျှင် မိ မိ ကြိုက် ရာ ကို ရှာ ဖွေ ကြည့် ရှု ကြ ပါ လေ ။ ။ မန်ဘာဝင်ပေးခြင်း ၊ Vote လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် Credit ပေးခြင်းဖြင့် Post တင်ပေးသူကို ကူညီပေးပါ]
သစ္စာရှိပါ၊ လိင်ကိစ္စကို ဆင်ခြင်ပါ
သစ္စာရှိပါ၊ လိင်ကိစ္စကို ဆင်ခြင်ပါ ရေး - ကမ္ဘာကျော် ရတနာဝင်းထိန် Typed by Kaungmyattun99(အချစတ် ကသ္က လို )် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ် ကျေနပ်သည်။ အဖူးအညွန့်လေးတွေကို သီးဦးသီးဖျား စားရခြင်းဖြင့် အာသာဆန္ဒတွေ အပြည့်ဝ လွန်ခဲ့ရသည် မဟုတ်လား..။ ခင်မုန်းနှင့် မိဆွေတို့ကို ငှက်စာဆော်ခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံက ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကျေနပ်စေခဲ့ခြင်းပေပဲလား..။ သို့တည်းမဟုတ် ယင်းနောက်မှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆိုသလို ကျားရှေ့မှောက်လျက် လဲခဲ့ကြသော .. အစိုး နှင့် လဲ့မွန် ဆိုသော အပျိုမလေးများကိုလည်း .. အောင်က အလွတ်မပေးခဲ့..။ ခက်သည်က အသေအချာ လက်ထပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးကာမှ သင်းကလေးတို့က မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် အိမ်မှ လူကြီးများ ပေးစားသူများနှင့် လက်ဆက်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်..။ ဘယ်သို့ တတ်နိုင်ပါမည်နည်း…။ အောင် အနိုင်ပိုင်းခဲ့သော ကိစ္စများ မဟုတ်ခဲ့ပါ..။ နိုင်လိုမင်းထက် အနိုင်ကျင့်သော ပြဿနာမျိုးဟု အဘယ်သို့ စွဲချက်တင်မည်နည်း..။ ကုသိုလ်ဟုပဲ ဆိုရလေမည်လား..။ အစိုးဆိုသော မိန်းကလေးကို၎င်း၊ လဲ့မွန် ဆိုသော အတန်းတူ သူငယ်ချင်းမကို၎င်း၊ အောင့်ဘဝစာမျက်နှာများ၌ ထည့်သွင်းရေခြစ်၇သော ကာလသည် ခင်မုန်းနှင့် မိဆွေတို့ ခလေးတွေ တပြုံတမကြီး ရလောက်ပြီဖြစ်သော အချိန် အပိုင်းအခြားသို့ တိုင်ချိန် ဖြစ်သည်..။ ယခုတော့ အားလုံးနှင့် ဝေးရာ အစိမ်းရောင် မျက်လုံးများ ကွယ်ရာသည် (မြိုင်သာ ) ဆိုသော ရွာကလေး၌ အခြေချလိုက်ရင်း ဘဝကို တည်ငြိမ်ခန့်ညားစေရန် ကြိုးစားနေသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကျေနပ်သည်..။ အချစ်ဟောင်း .. အဖြစ်ဟောင်း ဆိုတာကလည်း (လူတိုင်း) ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် ကျော်လွှားခဲ့ရသော ဘဝအခြေအနေများသာ ဖြစ်ပေရာ၊ ဒါကြီးကို ဆွေးနေလို့လဲ အပိုသာဖြစ်မည်ဟု ကိုယ့်ဖာသာ ခံယူခဲ့သည်..။ ထို့ကြောင့်လည်း တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကျေနပ်နေနိုင်ခဲ့သည်..။ မြိုင်သာသည် အခြေချ အနေမှန်လာသောအခါ ကိုယ့်အား တိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန်ဟုပင် ရွာသားများ က မမြင်ကြတော့..။ လူရော.. ခွေးရော… နွားရော..ကြောင်ရော .. အကုန်ကုသော ဆရာဝန် ဖြစ်လာသည်..။ မေထုန် သားစပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်နိုင်သောအခါ ကိုယ့်အား " ဆရာကြီး"…"ဆရာကြီး" .. ဖြင့် တစ်ရွာလုံးက ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်အလား အခြေအနေသို့ ရောက်လာခဲ့တော့သည်..။ ကိုယ်ကလည်း မြိုင်သာရွာကလေးကို သံယောဇဉ် ဖြစ်မိနေပြီ..။ ချစ်သော မြိုင်သာနှင့် တစ်သက်မခွဲတော့ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်..။ စိတ်ဒုန်းဒုန်းချမိခဲ့သည်က အမှန်..။ သို့သော် မြိုင်သာသို့ ဘွဲ့ယူစာတမ်း တစ်ခုပြုစုရန် ရောက်လာသော… ဝေး.. ဆိုသည့် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရောက်လာသောအခါ….။ ကိုယ့်ဘဝသည် ရေကူးရင်း မိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရသလို ဘာမှ မသိလိုက်ခင်… ရေမျောခဲ့ရသည်..။ အမှန်က သီးဦးစား ငှက်စာဆော်ခဲ့သော ငယ်စဉ်ဘဝက အကျင့်ဆိုးလေးကြောင့် ခံလိုက်ရခြင်းပါလား..ဟု သိလိုက်ရသောအချိန်သည် လွန်စွာမှ နှောင်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း နောက်ကျစွာ သိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်..။ " ဆရာကြီး….ဆရာကြီး…ဧည့်သည်တွေ ရောက်လာပြီ…" ကိုယ့်တပည့်လေး သက်လွင်က ပုဆိုးတစ်ဖက် စုကိုင်ရင်း ကိုယ့်ခြံဝမှ လှမ်းအော်သည်..။ အိမ်အောက်ထပ်မှ အင်းစပ်အမဲလိုက်ခွေးမကြီး မဟာ က ဝေါင်းကနဲ ဝေါင်းကနဲ နှစ်ချက်ဆင့်ဟောင်ပြီးမှ သက်လွင်မှန်း သိကာ လှစ်ကနဲ ပြေးပြီး သက်လွင်တစ်ကိုယ်လုံးကို လျှာဖြင့် ယက်၏။ " တောက်…ဖယ်စမ်း…မဟာ…နင့်ကို ဧည့်သည်တွေလာရင် ကြိုးနဲ့ ချည်ထားရလိမ့်မယ်..ဟင်း…" သက်လွင်က လည်ပတ်ကို ဆွဲပြီး ခွေးလှောင်အိမ်ကြီးထဲ သွင်းပြီး ကြိုးနှင့် ချည်လိုက်သည်..။ ကိုယ်… အိမ်အောက်ထပ်ကို ဆင်းလာသောအခါ မဟာတစ်ကောင် တအင်းအင်း တအီးအီးဖြင့် လှောင်အိမ်ကို ကုတ်ခြစ် ကိုက်ဖဲ့နေသည်…။ " ကိုသိန်းဟန်ကြီးတို့ အိမ်မှာလား…သက်လွင်.." " ဒီကို လာနေကြပြီ…ဆရာကြီး….၊ ရှစ်နာရီလောက်ကထဲက ရောက်နေကြတာ…" " ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်လဲကွ.." " မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ထဲပါ..ဆရာ..ငယ်ငယ်လေးတွေ.." ကိုယ်ဘာမှ ဆက်မမေးတော့..။ နွားခြံဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့၏။ လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရက်ခန့်က မျိုးဥသွင်းထားသော အမှတ် ၀၄၁၅ နွားမကြီးကို အကဲခတ်သည်..။ အစားကောင်းပြီး ဝမ်းဖွံ့လာပုံရသည်..။ အခြေအနေကောင်းသည်ဟု ၀၄၁၆ ကို မှတ်ချက်ရေးသည်။ ကောင်ရေ ထောင်ကျော်ရှိသော မြိုင်သာသည် စုပေါင်းမွေးမြူရေး နွားခြံဧက ၁၈ ဧကကျော်သည်..။ " ဗျို့ ဆရာ… ဧည့်သည်တွေလာတယ်ဆိုလို့ ခြံထဲသွားရှောင်နေတာလားဗျ…ဟားဟား..ဟား…" " ဟား…ကိုသိန်းဟန် .. လာဗျို့…(၀၆) ကိုကြည့်နေတာလေ… အခြေအနေကောင်းတယ် ဗျ…" " ဆရာကြီးကတော့ အချိန်ရှိသရွေ့ ခြံထဲမှာပဲ တွေ့ရတယ်ဗျာ….တစ်ခါတလေ ရွာထဲ လမ်းလျှောက်စမ်းပါဗျာ.." အတွင်းရေမှူး ကိုစိန်က ရင်းနှီးစွာပြောသည်..။ " ဆရာကြီးက ရိုးမဖက်ပဲ လျှောက်တယ်ဗျ… ခင်ဗျားတို့ရွာက စိတ်လှုပ်ရှားစရာ တစ်ယောက်မှ မရှိတာ.." သက်လွင်က ကိုစိန်အား လှမ်းပြောသည်..။ " အဲဒါတော့.. မင်းမှားပြီးကွ..သက်လွင်…၊ တို့ရွာက ကွမ်းတောင်ကိုင် မယ်မှုံဆိုရင် မြိုင်သာရဲ့ အလှသရဖူပေါ့…" " ဟားဟား…အဲဒီအလှသရဖူနဲ့တော့ ကျုပ်ဆရာကြီးနဲ့ မပေးစားပါရစေနဲ့ဗျာ..၊ နှစ်ယောက်လုံး စကားမပြောပဲ အရိုးမြေကျရုံပဲ ရှိမယ်.." မယ်မှုံက မြိုင်သာတစ်ရွာလုံးသိသော စကားမပြောတတ်သည့် ယခင် သူကြီးဟောင်း ဦးလူဝ သမီးအလတ်မ ဖြစ်သည်..။ မယ်မှုံအောက်မှာ ခင်မှုံဆိုသောအငယ်မက သမန်းပင်ရွာမှ ဖိုးလုံးနှင့် အိမ်ထောင်ကျကာ ခလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီ..။ မယ်မှုံမှာ စကားမပြောတတ်သည်မှအပ ထူးထူးခြားခြား အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး ဖြစ်သည်..။ သက်လွင် စိတ်ကူးယဉ်သောမိန်းကလေးများထဲ၌ မယ်မှုံတစ်ယောက်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်သည်ကို သိနေ၏ ။ " ဧည့်သည်တွေ ပါလာတယ်ဗျ….ကိုအောင်…" သိန်းဟန်ကြီးက အိမ်ပေါ်ထပ် လှေခါးရင်းမှ အော်သည်..။ " အပေါ်ခေါ်သွားဗျာ….ကျုပ်လာပြီ….ခဏလေး…." +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ "ဟင်.." " အို…." ကိုယ်နင်းထားသော မြေကြီး နိမ့်ဆင်းသွားသလိုလို မိုကြိုးစက်ကွင်းတစ်ခု ရစ်ပတ်ခြင်း ခံလိုက်ရသလိုလို တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းမြနွေးထွေးသွားကာ ရင်ခုန်မြန်လာသည်..။ နှလုံးသားသည် လူးလူးလွန့်လွန့် လှိုက်ခုန်သည်..။ ကိုယ့်အကြည့်စူးစူးကြောင့် ခလေးမလေးကိုယ့်ရှေ့၌ တုံ့ဆိုင်းရပ်တန့်ပြီး ကိုယ့်မျက်လုံးများတလက်လက်ကို ဖယ်ရှောင်ခေါင်းငုံ့လိုက်ရှာသည်..။ သလုံးသားတစ်တစ် ဝင်းဝင်းလေးပေါ်အောင် ထမီကို တိုတိုဝတ်ထားပြီး ယောက်ျားရှပ် ဂျင်းတစ်ထည်ကို လွှမ်းထားသည်..။ တိုနံ့ရှင်းလင်းသော ကျားဟန် စတိုင်က ထင်းထင်းလေး ပေါ်နေသည်..။ မျက်ခုံးထူထူ မှောင်မှောင်လေးနှင့် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးအမ်းအမ်းလေးက တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သတိရစေသလိုပင်..။ " တက်လေ..ခလေး…" " ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့ရှင့်…" ခလေးမလေးနောက်မှ အစိတ်ဝင်အိုးခန့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဝက်ပုတ်မလေး တစ်ကောင်က ကိုယ့်ကို ပြုံးစိစိကြည့်ရင်း တက်လိုက်သွားသည်..။ ဆတ်ကနဲ နှလုံးသားအား ဝေဒနာ မီးစလေးက ထိုးဟတ်လိုက်သလို အောင့်ကျင်သွားရသည်..။ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " ဆရာ…" " ပြောလေ…ဝေး….ဘာသိချင်သေးလဲ.." " ဟို…ဟိုလေ…သားစပ်တဲ့ကိစ္စ.." " အော်…ဒါက ဗီဇ ဂျင်းပေါ့လေ…အောင်မြင်ပြီး မှည့်နေတဲ့ မျိုးစေ့ …အဲ…ဖို မျိုးဥ…ကိုမှာယူပြီး သန္ဓေဆောင်မဲ့ နွားမ သားအိမ်ထဲ သွင်းရတာပါ..တက်ကနစ်က ရိုးရိုးလေးပေမယ့်..ကျွမ်းကျင်မှု လိုမယ်..၊ အတွေ့အကြုံလိုမယ်…" " အင်း…အဲဒါ…သိတယ်လေ…ဟိုဒင်း.." " ပြော…" ကိုယ်က လက်အိတ်အပါးစားတစ်ခုကို ညာဖက်လက်၌ စွပ်လိုက်ရင်း ဝေးဆိုသော သာလိကာ အရှက်အိုးမလေးကို လမ်းကြောင်းပေးရသည်..။ ဝေးမျက်နှာက ပြုံးမလို နဲ့ မဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေသည်..။ " ပြောလေ…ဝေးရဲ့.." " ဟို….နွားမက …ခံရဲ့လားလို့….." " အော်….ခံချင်အောင် လုပ်ပေးရတာပေါ့…ဝေးရယ်.." " ရှင်…." ဝေးမျက်လွှာလေးပင့်ပြီး ကိုယ့်အား ကြည့်သည်..။ ကိုယ်က အနှောင့်မလွတ်သော စကားအသုံးကို ပြန်ဖြေရသည်..။ "ဒီလိုလေ…ခြံသွင်းကြိုးတုတ်ပြီး ဆလင်းနဲ့ အတင်းထိုသွင်းရင်တော့ ရတာပေါ့..၊ ဒါပေမယ့် နွားနာတယ်..အဆင်မသင့်ရင် အင်္ဂါတွေဘာတွေ ပွန်းပဲ့ပြီး အနာရတတ်တယ်.." " ဟုတ်ကဲ့…" ဝေးက ကိုယ့်ထံမှ မျက်လုံးလကွှဲာခေါင်းငုံ့ရင်း ဆိုသည်။ ကိုယ့်စကားတွေကလည်း ပြန်ဖြေကာမှ ချည်သလိုဖြစ်နေ၏။ " ဒုတိယအကြိမ် လက်တွေ့ဆင်းတုန်းက ဆရာကြုံဖူးတယ်လေ..၊ ဒါက လက်တွေ့ဆည်းပူးမှ အနီးကပ် လေ့လာပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ယူရတာမျိုး…ဝေးရဲ့.." " ဒုက္ခပဲ…" ဝေး.. တိုးတိုးလေး ညည်းလိုက်သံကို ကြားလိုက်၏။ အားလည်း နာသည်..မတတ်နိုင်..။ " ဟိုကွာ…အရှင်းဆုံးပြောရရင် နွားတစ်ကောင်နဲ့ အရင်တွေ့ပေးရမယ်…၊ နွားသိုးက လျှာနဲ့ ယက်လို့ အမြီးထောင်ပေးလာတဲ့ အချိန်မှာ စလင်းကို သွင်းချည်ထုတ်ချည် လုပ်ပေးပြီး မျိုးဥကို သားအိမ်ထဲ ရောက်အောင် ထိုးသွင်းရတာ..၊ နဲနဲတော့ အကိုင်အတွယ်လိုတယ်.. အထူးသဖြင့်တော့ နွားသိုးရဲ့ နဖားကို တင်းတင်းကိုင်နိုင်မဲ့ နွားသိုးထိန်းယောက်ျားလေးတစ်ယောက် လိုတာပေါ့ကွယ်.." " အဲဒါကြီးက အတော်ဆိုးဝါးတာပဲ.." " အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူမျိုးဥနဲ့တောင် အငှားသန္ဓေဆောင်နေကြပြီလေ..ဝေးရဲ့ ၊ ညည်း စာတွေ ဖတ်ဖို့ လိုအုံးမယ်ထင်တယ်..နော.." " ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ပါ..ဆရာ.." " သူတို့ဖာသာ မိတ်လိုက်တဲ့အခါ ပိုဆိုးတယ်..၊ နွားမနောက်မှာ နွားထီးတွေ တတန်းကြီး ပြိုင်လိုက်တာ..၊ တစ်ခါတလေ နွားမတောင် ကျိုးပဲ့ပြီး မထနိုင်ဘူး..၊ အဲဒီဆုံးရှုံးမှုနဲ့ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရဖို့ ထွက်ပေါက်ဟာ မေထုန်မဲ့ သားစပ်ခြင်းပညာပဲ ဝေး…" " ဟုတ်…." ဝေးက မှတ်စုလေးဖြင့် လိုက်ရေးမှတ်ရင်း ခေါင်းညိမ့်သည်။ ဝေး၏ နုဖတ်သော မျက်နှာလေး ၊ ပျိုမြစ်နုနယ်သော အသားအရေလေးက မှဲ့တစ်ပေါက် မစွန်းအောင် ဝင်းမွတ်နေ၏။ လှိုက်ကနဲ ရှိုက်မိသွားသော သက်ပြင်းနှင့်အတူ နှလုံးခုန်သံသည် အပြင်သို့ ဟိန်းထွက်လာသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ထိုအခါ အကြည့်ကို အတင်းလွှဲယူရ၏။ ကိုယ့်အဖြစ်ကို ရိပ်မိဟန်တူသော ဝေးက ပေါင်ကြားသို့ ကပ်ဝင်နေသော ထဘီကို လက်ကလေးဖြင့် ဆွဲကာ လေကို ကျောပေးရင်း ကပိုကရိုလေးပြုံးပြရှာသည်။ ကျော့ရှင်းပြေပြစ်သော ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအဆစ်၏ ဖုထစ်ချိုင့်ဝှမ်း မို့မောက်မှုလေးများကို ပသို့မျှ ထိန်းမနိုင်သောအခါ ဝေးမျက်နှာလေး စတော်ဘယ်ရီရောင် ပြေး၏။ လေတင်နှင့် လေအောက်မို့ ဝေးထံမှ ရေမွှေးနံ့မဟုတ်သော နံ့သာမွှေးအနံ့တစ်မျိုးကိုလဲ ရှူရှိုက်မိသည်..။ " စားကျက်တွေဖက် သွားကြည့်လို့ ရမလား ဆရာ…" " နဲနဲတော့ ဝေးတယ်…. မပူခင်ပြန်နိုင်မလား.." " ဝေးက အလေ့အကျင့် ရှိပြီးသားပါ..ဆရာရဲ့.." " အင်းပါ…ဝေးက နုနုနွဲ့နွဲ့လေးမို့ ပြောတာပါ.." "အံမယ်…နော်.." မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး အံမယ်နော်ဟု ပြောရင်း ဆက်စကားစရှာမရတော့ပဲ အောင့်လက်မောင်းကြီးကို ဆွဲဆိတ်သလိုမျုိး ဟန်လေး လုပ်ပစ်သည်။ " ဆရာလဲ အရမ်းနုတာပါပဲ…နော်…" " ဘာနုတာလဲ..ဝေးရဲ့.." " ကိုသိန်းတန်ကြီးက ဆရာ အသက် ၄၀ ကျော်ပြီလို့ ပြောတာကို ဝေးက နောက်နေတယ်ပဲ မှတ်တာ…" "အင်း..ကျော်ပြီ ဝေးရဲ့…အဟုတ်…" " ဆရာက အရမ်းကြီးချင်နေတာ ထင်ပါတယ်..၊ ဆရာ့ ရုပ်က ၃၀ တောင် ပြည့်ချင်တဲ့ ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး…" " ငယ်ငယ်တုန်းက အားကစားလုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးတွေပါ ဝေးရယ်.." " ဘာကစားတာလဲ..ဆရာ…" " အလေးမနဲ့ ဗမာ့လက်ဝှေ့.." " ဟလား…. ဒါကြောင့် ဆရာက နုနေတာ.." " ကဲ….အပြန်အလှန် မြှောက်ပင့်ပြီးကြပြီ…အလုပ်စကြစို့..ဟုတ်လား…" " ရှင်…ဘာအလုပ်စမှာလဲ….ဆရာ.." " နို့…ဝေးပဲ စားကျက်တွေထဲ သွားကြည့်ချင်တယ် ဆို…." " ဟူး…တော်ပါသေးရဲ့…" ဝေးဟန်လေး….မျက်စောင်းဝေ့ အပြုံးလေးများ တစ်ပြိုင်တည်း ပေါင်းစုထွက်ပေါ်လာသော တော်ပါသေးရဲ့ နောက်ကွယ်တွင် ဝေးသည် ရင်းနှီးယုံကြည်လေးစားမှုတို့ဖြင့် (မြင်ဖူးသော) အပြုံးလက်လက်ကလေး ပြုံးပြလိုက်သည်။ ရင်က ခပ်ရိုင်းရိုင်းလေး ဆတ်ခုန်သည်။ " ဝက်ခြံထဲ ဝင်ဦးမလား ဝေး…" " ကောင်းသားပဲ .. ဆရာ…" ဝက်ခြံ စည်းရိုးဝသို့ ရောက်သည့်တိုင် လူသူအရိပ်အယောင် မမြင်ရ..။ " အု…အု….အု…အီး…အီ…အီး………." ဝက်မတစ်ကောင်၏ ဆွဲဆွဲငင်ငင်လေး ညည်းညူသံကိုသာ ကြားနေရသဖြင့် ခြံအနောက်ဖက်သို့ ကွေ့ထွက်ခဲ့ကြသည်။ "ခွေးမသား…ဒိပ်ကြီး….." ဒိပ်ကြီးဆိုသူမှာ အသက် ၃၀ ခန့် သန်မာထွားကြိုင်းလွန်းလှသော အထမ်းသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အောင်လံ ၊ သရက်မြို့များသို့ ခရီးထွက်စဉ်က ကိုယ်နှင့် ရင်းနှီးခဲ့ပြီး ဝက်ခြံ၌ အလုပ်ပေးထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏။ ဒိပ်ကြီးက အိမ်ထောင် သုံးဆက်၊ မုဆိုးဖို ။ ယခု ဒိပ်ကြီးတစ်ယောက် လူလာမှ လီးဖြဲသော ဇာတ်ထုပ်ကို ခင်းနေလေသည်။ ဝက်မဒန်းမလေးတစ်ကောင်၏ ခါးကို ဆုတ်ကိုင်ကာ အဝတ်အစားကင်းမဲ့နေသော ဒိပ်ကြီးက နောက်မှ ဒူးကွေးလိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒိပ်ကြီး အဝတ်အစားများက ဝက်ခြံတန်းပေါ်တွင် တင်ထားသည်။ တစ်ဖက်ခြံမှ ဝက်သိုးကြီးတစ်ကောင်က ခြံကိုကျော်တက်ရန် တဝုန်းဝုန်း ကြိုးစားမာန်ဖီနေသည်။ ဒိပ်ကြီးက သူ့လီးကို ဝက်မစောက်ဖုတ်ထဲမှ အသာအယာနှုတ်လိုက်သည်။ ခပ်တုတ်တုတ်နှင့် ဒစ်ကြီးနီရဲနေသော ဒိပ်ကြီး၏ တန်ဆာကို ဝေးနှင့် ကိုယ် ပြိုင်တူမြင်ကြသည်။ ဆွဲနှုတ်လိုက်သော ဒိပ်ကြီး လီးဒစ်တွင် ဖြူဖွေးသော အရည်အချို့ ကပ်ငြိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ဒိပ်ကြီးက သူ့လီးကို အဝတ်တစ်ခုနှင့် သုတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဝက်မလေးစောက်ဖုတ်ကိုလည်း စို၍နေသော အရေများကို သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့လီးကို ကိုင်လျက် ဝက်မစောက်ဖုတ်နှင့် မထိတထိ ကလိပေးနေရာ ဝက်မလေးမှာ မရိုးမရွလေးဖြစ်လာပြီး .. အမြီးလေးထောင် ပေါင်လေးကားရင်း နောက်သို့ ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ တိုးလာပေသည်။ ထိုအခါကျမှ ဒိပ်ကြီးက သူ့လီးကို ဝက်မစောက်ပတ်ထဲသို့ တေ့မြုပ်ထားကာ ဝက်မခါးလေးကို ပြန်ကိုင်လိုက်သည်။ " ဘွပ်…စွပ်….အီ…အီ…ဘွပ်…..စွပ်……" ဝက်မစောက်ဖုတ်ထဲမှ ထွက်လာသော စောက်ခေါင်းသံသည် အတော်လေး ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မြည်သည်။ ဒိပ်ကြီး လီးကလည်း သာမန်မြင်းသိုးတစ်ကောင် မာန်မထမီ အနေအထားလောက်ကို ကြီးမားသည်။ မဲနက်လိမ်ရှုပ်သော လမွှေးများနှင့် ဝက်မလေး၏ ပန်းနုရောင်စောက်ဖုတ်တင်းတင်းလေး ဖိကပ်မိသည်အထိ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်း ဝက်မလေးခမျာ ရှေ့လက်ကလေးနှစ်ဖက် ညွှတ်ကွေးသွားတတ်ရှာသည်..။ ဝက်ခြံမှ ကိုယ်က ချာကနဲ ပြန်လှည့်သည်။ " အိ…." ဝေးနှင့် ရင်ချင်းအပ်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားကာ ဝေး၏ ရင်သားအိအိလေးအစုံကို ကိုယ့်လက်က ထိခပ်မိသည်။ " အ…..ဆောရီးဝေး…ဟိုဘက်သွားရအောင်…" ဝေးထံမှ ဘာစကားမှ ထွက်မလာ..။ ကိုယ်လည်း ဝေးမျက်နှာလေးကို မကြည့်ဖြစ်အောင် ရှေ့မှ လစ်ရသည်။ အော်…ဒိပ်ကြီးကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ရ ကောင်းမလား…။ Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " ဒီကောင် ဒီလိုလုပ်နေတာ ကြာပြီ ဆ၇ာကြီး…" " မင်းတို့က မတားဘူးလားကွ…" " တားပါသော်ကော..ဆရာကြီးရယ်…၊ သားတစ်သား မိတိုးကို လုပ်လွန်းလို့ မဒန်းတွေကို လုပ်လို့ပြောထားရတာ အာပေါက်နေပြီ..၊ စောက်ကျင့် သိပ်ဆိုးတာ.." ဒိပ်ကြီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တို့ အစည်းအဝေးထိုင်ရ၏။ " ဒိပ်ကြီးကို အလုပ်ဖြုတ်ဘို့ တော့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး ဆရာ…" " ဒါလောက် အကျင့်ဆိုးတဲ့ ကောင်…" " မဟုတ်ဖူး…ဒါ.ဒါ…မွေးနှုန်းတောင် တိုးသေးတယ်…ဟဲဟဲ…" " ခွေးမသား…လူတွေမွေးလာမှ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်း …" " အာ…ကြံကြံဖန်ဖန် ဘယ်တော့မှ မမွေးဘူး…ကျနော် ပြောရဲတယ်.." " အံမာ…မင်းက သုတေသန လုပ်ထားလို့လား…" သာဖျံ ပါးစပ်ပိတ်သွားရင်း ခေါင်းငုံ့လိုက်၏။ " သူတောင်းစား… မင်းလဲ ဒိပ်ကြီးလိုကောင်နဲ့ တူတယ်.." သက်လွင်က ဝင်ဟောက်သည်။ သာဖျံ ရယ်လိုက်၏။ " လူလုပ်တိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေက လူမွေးမယ်ဆိုရင် ဆရာ…ချက်ဖောင်းတို့တဲက နွားမတွေ လူချည်းပဲ… ဘာဖြစ်လို့လဲ သိလား..၊ ချက်ဖောင်းတို့ ညီအစ်ကိုတွေ စပါယ်ရှယ် ကိုင်တာ..၊ အမယ်..သူတို့ဟာက နိပ်တော့ နိပ်သား ဆရာရဲ့.. အချိန်တန်ရင် နွားမတွေ ဇောင်းထဲ တန်းဝင်တာ…" " မင့်နှမ…ဇောင်းထဲ ဝင်ရမလား…" " တင်းကုပ်….ထဲ….ဟဲဟဲ…" ဝက်မ မဒန်းအရွယ်တွင် လူတန်ဆာနှင့် အတော်တူသဖြင့် လူအဘို့ အာသာပြေ ကာမစိတ်ထကြွခြင်းမှာ သဘာဝနီးစပ်သော်လည်း နွားနှင့်မြင်း စောက်ဖုတ်အယ်အယ်ကြီးများကို ဒီကောင်တွေ ဘယ်လိုများ လုပ်ပါလိမ့်ဟု တွေးမရ..။ ကိုယ်တို့အစည်းအဝေးထိုင်နေစဉ် ဦးလူဝသမီး မယ်မှုံ ကိုယ့်အား လာခေါ်သည်။ စာတစ်စောင် ကမ်းပေး၏။ မယ်မှုံက စကားမပြောတတ်ပေမယ့် ချောမောသူလေးဖြစ်၏။ တောဆန်ဆန် ဆင်ယဉ်ထုံးဖွဲ့ထားသော မယ်မှုံအလှအပက မင်းကြိုက်စိုးကြိုက် … လုံးကြီးပေါက်လှ ။ ကိုယ် စာဖတ်ကြည့်သည်။ ဆရာ…. သူကြီးမိသားစုက ထမင်းကျွေးချင်လို့တဲ့ ဆရာ့ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ…၊ ဝေးလဲ အားနာနာနဲ့ သူကြီးအိမ်ရောက်နေပြီ ။ လိုက်ခဲ့ပါနော်..ဆရာ..၊ ဝေး တို့ စောင့်နေမယ်..။ ဝေး… " အော်..အေးအေး….မယ်မှုံပြန်နှင့် ..ဆရာလာခဲ့မယ်…လို့.." " ဘာစာလဲ ဆရာ.." " ထမင်းစား ဖိတ်တာပါကွာ..၊ ဦးလူဝ အိမ်…က.." " အင်း…ဆရာတို့များ လေးဆယ်ကျော်တာတောင်မှ စွံတုန်းပဲ…." " ဘာဆိုင်လို့လဲ….ဟ.." " ဟဲ့…ငတုံးရဲ့ ဦးလူဝက မယ်မှုံနဲ့ ဆရာ့ကို နေရာချပေးချင်နေတာ..သိပလား.." " အင်….အ…အ…….အိ..အင်….." မယ်မှုံက ဖိုးလုံးကျောကုန်းကြီးကို တဘုံးဘုံးထုရင်း ငိုဟန်ပြသည်။ " မစ..ကြနဲ့ကွာ…၊ အလကား မယ်မှုံ…ဒီကောင်တွေ…" ကိုယ်က လူကြီးပီပီ စကားဖြေပေးရ၏။ ဖိုးလုံး ကမရပ်။ သူငယ်မကို ဆက်နောက်သည်။ " မယ်အုံကိုတောင် နင်တစ်ခါ ပြောဖူးတယ်ဆို..၊ ဆရာ့ကို နင်ကြိုက်နေတာလို့…. ငါ့မိန်းမက ငါ့ ပြန်ပြောတာ…ဟား..ဟား…." သည်တစ်ခါ အထုအထောင်းသာမက ရေနွေးပန်းကန်လုံးနှင့်ပါ ကောက်ရွယ်သဖြင့် မနည်းကြီး ဆွဲလိုက်ရသည်။ " သနားပါတယ်ကွာ…မစ..ကြပါနဲ့…" " အော…အဲဒါတွေ ပြောနေတာ ဆရာရဲ့…ဒါကြောင့်………" " တော်စမ်း..ခွေးသူတောင်းစားတွေ…မလေးမစားနဲ့…" Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " ရှေ့အပတ်ထဲမှာ ဝေးတို့ ပြန်ရတော့မယ် ဆရာ.." " ကောင်းတာပေါ့…မိဘတွေနဲ့ ပြန်တွေ့ရတော့မဲ့ ဥစ္စာ.." ဝေး…သက်ပြင်းရှိုက်သည်။ ဧရာဝတီကမ်းနဖူးမှ နှစ်ပေါင်း မည်မျှကြာနေပြီမသိသော ကုက္ကိုပင်ကြီးက အရိပ်ကောင်းလွန်းလှသည်။ ထီးကြီးတစ်လက်မိုးထားသည်နှင့် တူလှ၏။ နေပြောက်ပင် မထိုးနိုင်။ လေက တဟူးဟူး တိုက်နေသည်။ " ကိုသက်လွင်နဲ့ ဟန်နီတို့ ချစ်နေကြပြီ.." စကားစ မရှိပဲ ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်သော ဝေးစကားကြောင့် ဝေးကို ဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်ဖြစ်၏။ ဟန်နီ ဆိုသည်က ဝေးအဖော် မိန်းကလေး.. ကိုယ်နာမည်ပေးထားသော ဝက်ပုတ်မလေး ဖြစ်၏။ " သူတို့ ခွဲရမှာ စိုးရိမ်နေကြတယ်လေ…" " ဝေး….." " ကို…." ယောင်ထူးလေး ထူးပြီးမှ ဝေး ခေါင်းကို ငုံ့ပစ်ရင်း ပြုံးနေ၏။ " ဝေးရော…. ခွဲရမှာကို စိုးနေလား …" " ဘယ်သူနဲ့လဲ…" ဝေးက ကိုယ့်အား မကြည့်ပဲ ခပ်တိုးတိုး ပြော၏။ " မြိုင်သာရွာနဲ့လေ…" " ဟင်း………" အဖျားရှူးသွားသော ကိုယ့်စကားကို ဝေး မကျေမနပ်လေး မျက်စောင်းထိုးလျက် မဲ့လိုက်သည်။ " မြိုင်သာမှာ ဝေးကို သံယောဇဉ်ထားမဲ့သူမှ မရှိတာ…" ဝေးအသံက အားငယ်လျက် ရှိုက်သံရောစွက်နေသည်။ ဝတ်ထားသော ဝေး၏ ဘလောက်အင်္ကျီလေးအတွင်းမှ ရင်သားအစုံ ချိုင့်ဝှမ်းလေးကို ကိုယ်ငေးနေမိလိုက်သည်။ လုံးကျစ်မို့ထွားသော ရင်အစုံကို အိကနဲ ထိတွေ့ခံစားဖူးစဉ်က ကိုယ့်ရင်များ တုန်ခပ်လှိုက်ဖိုခဲ့ဖူး၏။ သည်ခလေးမလေး ကိုယ့်အား စိတ်လှုပ်ရှားစေသည်တော့ အမှန်..။ " ဝေး ရယ်…….." " ဘာလို့ …. ခဏခဏ ခေါ်နေရတာလဲ…" ဝေး ငိုမဲ့မဲ့လေး ဆိုရင်း ခြေကို မသိမသာ ဆောင့်ပြ၏။ " မခေါ်စေချင်ရင်လဲ… မခေါ်တော့ပါဘူး…ဝေးရာ…၊ ကိုယ်က ဝေး ဖအေလောက် အရွယ်ကြီးပဲ…ဝေးကို ….ဝေး …ကို…." " ပြောလေ…ဝေးကို …ဘာဖြစ်လဲ…" " ဘယ်…ချစ် ရဲမှာလဲ…" " မဆိုင်….တာ…." ဝေးက တုံရီမောလျသောအသံနှင့် မျက်နှာလေးလွှဲရင်း ပြောပြီးမှ ရှက်ရွံ့စွာ ခေါင်းကို ငုံ့ထားပြန်သည်။ " ပြန်ကြပါစို့… ခလေးရယ်…" " အို့….ပြန်ချင်ပါဘူး…၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ချင်ပြန်…." " ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ထဲ ..သူများတွေ တစ်မျိုး မြင်မယ်…" " မြင်…မြင်….." သည်အရွယ်လေးတွေက ဇွတ်တရွတ်ပဲ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်က မြက်ခင်းပေါ်သို့ ကျောခင်းလှဲချလိုက်သည်။ ဝေးက ကိုယ့်ပေါင်ကြားသို့ တစ်ချက်ကြည့်သည်။ " ဝေးကို ရွဲ့တာလား…ဟင်.." " မဟုတ်ရပါဘူး ကွယ်…၊ ဝေး မပြန်ဘူးဆိုရင်.. ဒီနားမှာတင် အရိုးဆွေးတဲ့အထိ စောင့်ပေးမဲ့ လူပါ…" " သွား….အားကြီးပိုတယ်…." ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို လက်သီးနုနုလေးနှင့် ထု၏။ ကိုယ်က ဝေးလက်ကလေးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်၏။ ဝေး ခန္ဓာကိုယ်လေး အပေါ်သို့ မှောက်ကျလာသည်။ စင်စစ် ကိုယ့်ဆွဲအားသည် ယင်းသို့ မှောက်ကျလောက်အောင် မကြီးမားပေ..။ မဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေပြီလား…ဝေး…။ " လွှတ်….လွှတ်…. " ကိုယ့်ရင်ဘတ်၌ ပါးတစ်ခြမ်းကပ်ရင်း ဝေးက တိုးတိုးလေး ဆို၏။ " ချစ်တယ်…ချာတိတ်ရယ်…ချစ်မယ်နော်.." " သူများ ကြောက်တယ်…." " ဘာကို ကြောက်တာလဲ…ကွယ်…" " မပြောတတ်ဘူး…..ကိုယ်ရယ်.." ဝေးက… ကိုယ့်အင်္ကျီ ကျယ်သီးတစ်လုံးကို ပွတ်ကစားနေရင်း တိုးတိုးညှင်းညှင်းလေး ပြန်ပြောသည်။ ကိုယ့်လက်တစ်ဖက်က ဝေးတင်ပါးလုံးလုံးလေးကို ပွတ်ပေးနေမိ၏။ ဝေးက ကိုယ့်လက်ကို ဆွဲယူပြီး… " အဲလို…မလုပ်နဲ့ကွယ်… ဝေး .. ရင်တွေ ခုန်လွန်းလို့…" လေတိုးသံက ကျယ်ပြန့်သော ဝန်းကျင်၏ ဆိတ်ငြိမ်မှုကို ဖြိုခွင်းနေသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆီမှ လှိုင်းလေးက လေအဟုန်နဲ့အတူ စီးမျောပါလာသည်။ " ဒါဖြင့်…ဒါကိုပဲ ကိုင်မယ်…" "အို…အဟင့်…..မလုပ်နဲ့ကွာ….၊ မနေတတ်ဖူး…." စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်အတွင်းမှ လမင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးအစုံကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုတ်ညှစ်လိုက်မိသည်။ ရင်သားအစုံ၏ နွေးထွေးနူးညံ့သော အထိအတွေ့က ပေါင်ကြားမှ ညီတော်မောင်အား ထောင်းကနဲ ဒေါသအိုး ပေါက်ကွဲသွားစေလေသည်။ ရင်သားအစုံကို အကိုင်အညှစ် ခံလိုက်ရသော ဝေးက ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကြီးပေါ်သို့ ကနွဲ့ကယလေး လှိမ့်တက်လာသည်..။ ပါးစပ်မှလည်း …. " မလုပ်ပါနဲ့ ကွယ်… မနေတတ်ဖူးလို့ ..ဆို…ကြည့်ပါလား…ဟင့်…ဟင့်…" " ပြွတ်…ပြွတ်…အု..အွန်း.." နီစွေးဖောင်းအိသော နှုတ်ခမ်းလေးက ချိုသည်။ အတန်ကြာ စုပ်ယူထားပြီး လျှာချင်း ကလိနေမိကြသည်။ " အွန်း….အရမ်း အားသန်တယ်…နှုတ်ခမ်းတွေ ပြတ်ထွက်ကုန်ပလား အောက်မေ့ရတယ်…. သွား…သူ သိပ်ဆိုးတယ်..ကွာ.." ကိုယ်က ဝေးစကားအဆုံး၌ ဇက်ကိုလှမ်းကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းအစုံကို ချိုမွှေးရှိန်းမြစွာ စုပ်ယူရင်း ဆွဲပွေ့လိုက်ရာ ဝေးကျောပြင်လေးနှင့် မြေကြီး ကပ်သွားလေသည်။ မာကျော ကြီးမားသော ကိုယ့်လီးကြီးက ဝေးပေါင်ရင်းကို ဖိထောက်မိလေသည်။ " အ….တော်ပီ…တော်ပီ…ဒီထက်..မပိုနဲ့တော့..ကွယ်…နော်…" ဝေးက ကိုယ့်ကျောပြင်ကို သိုင်းဖက်လျက် ပွတ်ရင်း ချော့၏။ အောင့် အသက်ရှူသံက မုန်တိုင်းကျလာသံနှယ် ပြင်းထန်လာ၏။ စိတ်က မစေစားမီမှာပင် လက်တစ်ဖက်က ကျင့်သားရပြီးသလို အလိုအလျောက် ဝေး၏ ပိုးသားပျော့ ထမီလေးကြားထဲသို့ ခပ်ရဲရဲလေး ထိုးနှိုက်အုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်ပေးလိုက်မိလေသည်။ " အင်…..ဟင်….." ဝေး တွန့်ခနဲ တုန်သွားပြီး ကိုယ့်လက်ကို အတင်း ဆွဲထုတ်၏။ ဝေး၏ လက်သည်းလေးများက လက်ခုံကို စစ်ခနဲ စူးမိမှန်း သိလိုက်သော်လည်း လက်ဖဝါးက ငလိပ်ကျောက် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို ကပ်သလို ခွာမရအောင် မြဲမြံနေပေတော့ရာ ဝေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးမှာ လှုပ်လှုပ်ရွရွနှင့် မနေတတ်မထိုင်တတ်ကြီး တွန့်လိမ်လှုပ်ရှားလာလေတော့သည်။ ဝေး မျက်စိလေး စုံမှိတ်ချထားသည်။ အောင့်အနမ်းရှည်ကြီးအောက်၌ နှင်းဆီဖူး နှုတ်ခမ်းလေး နွမ်းရော်စ ပြုလာသည်။ " အင်း….အင်..ဟင်…ဟင်….အင်…ဟေ့အေး..ကွယ်…" နှုတ်ခမ်းတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေ၇ှာသည်..။ အောင်ဖိထားသောကြောင့် အိစက်သော နို့အုံလေးများက စက်ဝိုင်းလေးများ ပမာ ပြားနေသည်။ အောင်က သူ့ရင်အုပ်ကြွက်သားကြီးများနှင့် လှိမ့်ကြိတ်ပေးနေပြန်ရာ ဝေးခမျာ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ယားကျိကျိ ဖြစ်လာကာ ခံချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်လာနေ၏။ " ဖင် နဲနဲ ကြွ…." " ဘာ…ဘာလုပ်မလို့…လဲ…" " ထမီ ချွတ်ရအောင်လေ…" " အယ်….ဟင့်အင်း…မချွတ်ချင်ပါဘူး…" " ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးလား…" " ကိုယ်ကရော..ချစ်တယ် ပြောသေးလို့လား…" အောင် ဟက်ကနဲ ရယ်သည်..။ အသက်မပါ..။ မိမိဆန္ဒက စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိလေးကိုသာ တွေ့ချင်နေ၏။ " ချစ်တယ်….သိပ်ချစ်တယ်…ကွာ.." " သွားပါနော်….ဖင်ကိုင်ပြီးမှ ချစ်တယ်ပြော…မနေပါနဲ့နော…" အောင်က ဒုတိယအကြိမ် အသက်မပါစွာ ဟက်ကနဲ ရယ်၏။ ယောက်ျားရင့်မာကြီး .. အတွေ့အကြုံတွေ ရပြီးသား အောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ပေါက်ကွဲခါနီး မီးတောင်ကြီးတစ်လုံးနှယ် မသိမသာ တုန်ခါလာနေသည်။ ကြီးမားစွာ ထောင်ထနေသော လီးကြီးကလည်း ကွဲထွက်တော့မယောင် အောင့်ကျင်လာသည်။ လချောင်း အဖျား ထိပ်ပိုင်းမှ တဒိတ်ဒိတ် သွေးခုန်နေမှုကို လူက သိနေသည်။ ဝေး၏ ခြေနှစ်ချောင်းကြားထဲသို့ ခြေထောက်ထိုးသွင်းကာ ပေါင်ကားပြီး ဒူးဝင်အောင် တိုးဝင်နေမိပြန်သည်။ လုံးအိနူးညံ့သော နို့လေးနှစ်လုံးကိုလဲ မျက်နှာပြင်နှင့် ဖိပွတ်လိုက်၊ နမ်းစုပ်လိုက်ဖြင့် အထန်ကြီး ထန်လာတော့သည်။ " ချွတ်နော်…ဝေး….နော်…" " အို့…ရှက်တယ်….အာ…အဲလို အ၇မ်း မလုပ်နဲ့ကွာ…ကြည့်ပါလား..ဟိတ်..ထမီ ပြဲသွားမယ်.." " ဒါဖြင့်…လှန်ပေးလေ…နော်.." " ကွယ်…တစ်ခါထဲ….အငမ်းမရ…" လက်တစ်ဖက်က ထမီစနှင့် စောက်ဖုတ်ကို အုပ်ထားဆဲ..။ " ဝေး…လက်ဖယ်လေ…" " အဟင့်….ကြောက်တယ်…" " ဝေးကလဲကွယ်…ဖယ်ပါ…." "သေသာ သေလိုက်ချင်တော့တယ်…တကယ်ပဲ…" " ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး…ဝေးရဲ့" " မသိဘူး….မသိဘူး…အဟင့်….အ..ဟင့်…" " ဝေးရဲ့ စောက်ပတ်လေး ကောင်းအောင် ကိုယ်လုပ်ပေးမှာ…ဝေးရဲ့…" " အိုး…ကျွတ်…." မကြိုက်..ဤမျှ ရင့်သီးကြမ်းတမ်းသော အသုံးအနှုန်းမျိုးကျတော့ ဝေး ဒေါသ ဖြစ်သွားသည်။ ဝေးကို စောက်ပတ်တို့ လီးတို့နှင့်ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ကြီး ပြောဆို ဆက်ဆံခြင်းမျိုး ဝေး နားဖျားက ပူပြင်းနေသလိုပင်…။ " သိပ် ရိုင်းတာပဲ…" " ဆောရီးကွာ…ဝေး မကြိုက်ရင် မပြောတော့ဘူး..နော်.." " ကိုယ့်ပါးစပ်က သိပ်ကြမ်းတယ်.." ကိုယ့်အပြင်နဲ့ ကိုယ် အောင် ငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ စောက်ပတ်အသားနုနုလေးကို အောင်က လက်ဖဝါးနှစ်ဖက်နှင့် မိမိရရ ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်ရင်း အတွေ့အကြုံအရ စောက်စိလေးကို ဖွဖွ ညှစ်ပေးလိုက်သည်။ " အင်း….အင်း……ဟင့်…" အင်းကနဲအော်လိုက်၊ အသက်အောင့်ထားလိုက် ၊ အင့်ကနဲ အော်လိုက်ဖြင့် ဝေး ကော့တက်လာသည်။ ဆီးစပ်တွင် အုပ်ကိုင်ထားသော ဝေးလက်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်သည်..။ ဝေးလက်ကလေး တုံ့ဆိုင်း တုံ့ဆိုင်းဖြင့် လွှတ်လိုက်သည်။ " ဟ….အာ့….အဟင့်……" ဝေးဖင်လေး ဟောင်းလောင်းလေး ပေါ်လာသည်။ အောင့်မျက်စိအစုံက ပြူးကျယ်တောက်ပသွားသည်..။ လှလိုက်တဲ့ စောက်ဖုတ်ကလေး..၊ တစ်သက်နှင့် တစ်ကိုယ် ဤမျှ တင်းကား ပြည့်ဖြိုးသော မာကျစ်ကျစ် စောက်ပတ်လေးမျိုး မတွေ့ဖူးသေးပေ..။ စောက်ပတ်အသားလေးများက ပန်းနုရောင် ပြေးနေ၏။ လေမထိ နေမထိ ထိန်းသိမ်းလာသော စောက်ပတ်ကလေးအား ကြမ်းတမ်းကြီးမား တုတ်ခိုင်လှသော လီးကြီးဖြင့် လိုးသွင်းရမှာကိုပင် အားနာသလိုဖြစ်နေ၏။ ကော်ဇော အပြည့်ခင်းထားသော ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဂျပန်ဖိနပ်ကြီးဖြင့် မနင်းရက်သလို..အားနာ နှမြောကြီး…။ " အဟင့်…ဘာကြည့်နေတာလဲ…လို့…" မျက်ရည်တွေ ဝေ့ဝဲနေသည့်ကြားမှ ဝေးက အော်သည်..။ " သိပ်လှလွန်းလို့ပါ ဝေးရယ်…" " ကဲ…ဒါလောက်တောင် ဖြစ်တာ…ကြည့်..ကြည့်….ရော့….အင့်…" ဝေးက ထကြွလာသော ကာမစိတ် စေ့ဆော်မှုဖြင့် အောင့် ခေါင်းကြီးကို ဆွဲယူပြီး စောက်ပတ်ကို ကော့ပေးလိုက်ရာ.. အောင့်ပါးစပ်က ဝေးစောက်ပတ်ခုံနှင့် ထိကပ်သွား၏။ မထူးတော့.. အောင်က စောက်စိလေးရှိရာ စောက်ပတ်ချိုင့် နက်နက်လေးထဲသို့ လျှာကို လုံးချွန်ပြီး ထိုးသွင်းယက်တင်ပစ်လိုက်ရာ.. စောက်စေ့ဖျားနှင့် လျှာထိပ်လေး ထုတ်ကနဲ မာတင်းတင်းလေး တွေ့ထိကြသည်..။ " အိ…အ.." အသက်အောင့် အော်လိုက်ရင်း ဖင်ကြီးတစ်ခုလုံး အနုမြူဗုံး ကျသည့်နှယ်.. သွက်သွက်ခါ ရမ်းသွားရှာလေသည်..။ " ပြွတ်…ဗလွတ်…ရှလွတ်…ပြွတ်….ပျစ်.." " အ…အ….ဟိ….ဟ….အ….အဟင့်…အင်း…..အင်း….." စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား တစ်ဖက်ကို အမဲရွတ် ဆွဲသည့်နှယ် နှုတ်ခမ်းဖြင့် ညှပ်တင်ပြီး ဆွဲယူလိုက်ခါ ပြဲလာသော စောက်ပတ်ထဲသို့ လက်ညှိုးကို အသာအယာ ထိုးမွှေ ကလိလိုက်သည်..။ ညှီစို့စို့ ခပ်ညှင်းညှင်း သားရေနံ့လိုလို အနံ့လေးက အောင့်နှာခေါင်းထဲ တိုးဝင်လာလေ၏။ ရဲရဲနီသော စောက်ပတ်အတွင်းသားရဲရဲများ လှုပ်ရွကစားသွားသလို ယောက်ယက်ခတ်နေသည်ကို အနီးကပ် တွေ့နေရသည်..။ " ကျွတ်…အဟင့်….ရှီး….အ…အ…." " ပြွတ်….ပလပ်….ပြတ်….အွန်း….ပြွတ်….အို့….အိုး….ဟိုး..ဟိုး…အီး…ဟို…ယားတယ်…ကွယ်…." ဝေး ငိုသံလေးဖြင့် အူလိပ်လာသလို ရယ်ပြီး ပြော၏။ ဗိုက်သားလေးများမှာလဲ ဟက်ကနဲ ဟက်ကနဲ လှိုင်းထ လှုပ်ရှားသွားကြသည်..။ " ပြိ….ပြစ်….ပြွတ်…ပြွတ်…." " တော်…တော်…..အ….အ….ဟင့်…တော်ပါတော့…ကိုယ်ရယ်…." အောင့် ခေါင်းကို ဆံပင်များ စုကိုင်ရင်း အတင်းဆွဲမော့၏။ အောင်က စောက်ခေါင်းထဲသို့ လျှာကို ထိုးထည့်ပြီး ကလိလိုက်လေသေးရာ ဝေးခမျာ သိမ့်သိမ့်ခါသွားကာ သေးစက်များပင် ထွက်ကျလုမတတ်ဖြစ်သွားရရှာသည်..။ " တော်…ပြီ….ကွယ်….နော်…ဝေး ငရဲ ကြီး…လိမ့်မှာ…." " ကိုယ့် မိန်းမပဲ ဝေးရာ……" " အမယ်…နော်…သူ့မိန်းမလဲ မဖြစ်သေးဘဲနဲ့….ဟင့်…" ဝေးက မျက်စောင်းလေး ထိုးပြီး ပြောသည်..။ " အခု လိုးပြီးရင်…. ကိုယ့်မိန်းမ ဖြစ်ပြီလေ…ဝေးရဲ့." " ကြည့်…အဲဒါ သိပ်ခံတွင်း တွေ့နေတယ်…ဟလား…ဟွန့်…." ဝေးက ဆောင့်ဆောင့်လေး ပြောရင်း လက်သီးဆုတ်လေးဖြင့် လက်မောင်းရင်းကို မနာအောင်လေး ထုရိုက်သည်..။ အောင်က ဘာမှ မပြောတော့ပဲ သူ့ပုဆိုးကို ဆွဲလှန်လိုက်၏။ ငေါက်ကနဲ တောင်ထနေသော လီးကြီး ထွက်လာသည်..။ " အို့….အို….ကို့လီးကလဲ………." ဝေးစကားများ….လမ်းမှာ ရပ်သွားကြ၏။ လွှတ်ခနဲ ပြောမိပြီးမှ ပါးစပ်ရှက်သွားဟန် တူသည်..။ " ဝေး…ကိုင်ကြည့်လေ…." " အို….ကိုင်ချင်ပါဘူး…." " ကိုယ့် လင်လီးပဲ ဝေးရဲ့… နောက်ဆို အမြဲ ကိုင်ရမှာ…" ဝေးက ရှက်ရယ်လေး ရယ်ရင်း အောင့်လီးကို မရဲတရဲလေး လက်လေးဖြင့် တို့ထိကြည့်သည်..။ ပြီးမှ လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင် ပြီး လီးထိပ်ဖူးကြီးကို လက်ညှိုး ထိပ်ကလေးဖြင့် ပွတ်သပ်ကြည့်သည်..။ လီးထိပ်မှ ပစ်ကနဲ အေ၇ကြည်လေးများ ထွက်လာပြီး ဝေး လက်ခုံလေးကို ပေသွားသည်..။ " နဲတာကြီး မှုတ်ဖူး နော်…." " ဝေး… မကြိုက်လို့လား…." " ဝေး ဟာလေးနဲ့ တော်မှ တော်ပါ့မလား ဟင်…." " အာ..ဟာ….လီးနဲ့စောက်ပတ် ဆိုတာ…မတော်တာ ဘယ်ရှိမလဲ..ဝေးရဲ့…" ဝေး စောက်ပတ် အကွဲကြောင်းလေးကို ဒလစပ် ပွတ်ပေးရင်းမှ စောက်စိလေးကို ခပ်ဖိဖိလေး ညှစ်လိက်ပြန်သည်..။ " အ…အဟင့်…အဲဒါ….အဲ…အစိကို ..ကိုင်ရင် ဘာလို့ ခံချင်လာတာလဲ..မသိဘူးနော်…ဟင်.." " ဝေး ခံချင်နေပြီလား…" " အိုး…သူပဲ ဒီလောက် ကလိနေတာ…ဟင်း….ကဲပါ…လုပ်မှာဖြင့်…လဲ လုပ်တော့…" ဝေးက လီးကြီးကို လွှတ်ပေးပြီး ပက်လက်ကလေး လှဲချပေးလိုက်ရင်း အောင်က ဒူးနှစ်လုံး ထောင်လိုက်သည်..။ ပြဲရဲ နီတျာနေသော စောက်ခေါင်းလေးက အောင့်လီးကြီး အရှေ့၌ အသင့်အနေအထားဖြင့် အလိုးခံရန် ရှိနေလေသည်..။ အောင်က သူ့လီးကို ဇက်နှိမ်ပြီး မိုးပေါ်ထောင်နေသော လီးထိပ်ကို စောက်ပတ်အဝသို့ တေ့လိုက်သည်..။ စောက်ပတ်နှင့် လီးက အရွယ်မမျှ တင်းခံနေ၏။ အောင့် လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်ကို ဖြဲထားရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က လီးကို ကိုင်ကာ လိုးသွင်းလိုက်လေသည်..။ " ပြစ်….ပြွတ်…..အ…..အမေ့…." ဝေးက အောင့် ရင်အုပ်ကြီးကို လန့်တွန်းလေး တွန်းထားသည်.. ။ နွေးအိစိုစွတ်သော လီးထိပ်ကြိးက စောက်ပတ်လေးထဲသို့ လက်မဝက်ခန့် ဝင်သွားပြီး တုန်ခါနေသည်..။ ရှည်လျားတုတ်ခိုင်သော လီးချောင်းကြီးက ခပ်ကွေးကွေး အနေအထား၌ ရောက်ရှိနေသည်..။ " နာလား…" " နာတာ မဟုတ်ဘူး…တစ်မျိုးကြီး…." " လိုးမယ်..နော်…နာရင်ပြော…ဟလား…" " အင်း…အင်း….အို့..အမေရေ…..အင့်…" " ပြွတ်…ပြွတ်….ပြစ်….ဘွပ်…." " အား..ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်….ကျွတ်….အ…." " နာလို့လား…ဟင်…" " ကြပ်…ကြပ်တာ….အရမ်း ကြပ်တာပဲ..သေတော့မယ်…." " ပေါင်ကားထားလေ…." " ကားထားတာပဲ…လို့ …ဒီထက်ကားရရင်လဲ…ဟိုဟာ ပြဲရုံပဲ ရှိတော့မယ်…ဟင့်..ဟင့်.." ဝေး ပေါင်နှစ်ဖက်က သိန်းငှက်တောင်ပံလို ပြန့်ကားနေသည်..။ တစ်ခါတရံ စုဟန်ပြလိုက်..ခွာသွားလိုက်…။ " ပြွတ်….ဘွပ်…ပြွတ်…စွပ်…..အင့်….အင့်…အားလားလား…နာတယ်….နာတယ်…" နာလား…ဟု တတွတ်တွတ် မေးခဲ့သော အောင်က လီးကို အဆုံးထိ ဖိလိုးချလိုက်သောအခါ စောက်ပတ်လေးမှာ မဆန့်မပြဲ ဖြစ်ခါ စအိုနှင့် ဆက်နေသော အကွဲစပ်နေရာလေးမှ ဖြတ်ခနဲ ကွဲပြီး သွေးလေး စို့သွားလေသည်..။ " အမေရေ….အဟင့်…ကွဲသွားပြီ….အဟင့်…" " ပြွတ်…..ပြစ်…ပြွတ်….ပြစ်..ပြွတ်…." "အင့်..ဟင့်….အင့်…..ဟင့်………." အားပါပါ ဆောင့်လိုးလိုက်သော ဆောင့်လိုးချက်များက ဝေး၏ နို့လေး နှစ်လုံးကို အထက်အောက် ခါရမ်းသွားစေကာ ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲ ခေါင်းရင်းဘက်သို့ ခြောက်လက်မခန့် တိုးသွားစေလေသည်..။ " ဖြေး…..ဖြေး ဆောင့်ပါ..ကိုရယ်….ဝေး ထွက်မပြေးပါဘူး…" " သိပ်ချစ်လွန်းလို့ပါ…ဝေးရာ…" " သိပ်ချစ်ရင် အရမ်းဆောင့်တာပဲလား…..အမလေးလေး…." တစ်ချီမပြီးခင်မှာပင် ဝေးက လီးနှင့် ယဉ်ပါးလားသည်..။ အောင် လိုးသွင်းလိုက်တိုင်း စောက်ပတ်ကို ကော့ကော့ပေးတတ်လာသည်..။ စောက်စိလေးကလည်း အစွမ်းကုန် မာတောင်နေကာ ကာမအရသာကို အားရပါးရ ခံစားနေသည်..။ ကြီးမားတင်းထောင်နေသော လီးချောင်းကြီးက ဝေး၏ စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်ကြီး လိုးဝင်လိုက်တိုင်း ခါးလေးထဲမှ စိမ့်ကနဲ ကျင်ကာ ဖင်ကြီး ကြွတက်သွားသည်အထိ အလိုလို ကော့ပေးမိလျက်သားလည်း ဖြစ်နေတတ်၏။ သဘာဝ အကြောအချဉ် လွန်တုံ့မှုသည် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ အထိအတွေ့ကြောင့် အံ့ဖွယ်ကောင်းအောင် တွန့်လိမ်ကော့ပျံလျက် ဝဲယာ အထက်အောက် ကော့ရမ်း လှုပ်ညှစ်ခြင်း အတတ်ပညာများကို အလိုလို တတ်လာလေသည်..။ ကော့ပျံတက်လာသော ခလေးမလေး၏ ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ဆွဲလျက် အားနှင့် ဖိဖိ ဆောင့်လိုးသွင်းလိုက်သော ဆီးစပ်နှစ်ခု၏ ဖတ်ခနဲ မြည်ဟီးသံများ..။ " အင်း….ဟင်းဟင်း…ဟင်း….အား…….အား……." " ဖတ်…ပြွတ်…စွပ်…ဖတ်…ပြွတ်………." " အိုး….အို့…..အား…ဟ…ဟား…အိုး….အမေ့…အမေေ၇…အိ..အ….." ခပ်အုပ်အုပ်လေး ထွက်ပေါ်လာသော ယင်းအသံများ၏ နောက် ပြင်းပြလှိုက်မောသော အသက်ရှူသံလေးများ…။ " ပြီးပြီလား…ဟင်…." " ဟင့်အင်း…ခဏ နားထားတာ…" " အာ…အဟင့်…ညာတာ…သွား….ဖယ်တော့…" " နေအုံးကွယ်….နောက်တစ်ချီလောက် …" " ဟင့်အင်း…ဟင့်အင်း…တော်ပီ…ကွယ်…" " ခလေးက လိမ္မာရက်သားနဲ့ အဟင်း…" " သွားပါ… ခလေး ခလေးနဲ့ ညာညာပြီး လိုးနေတာ……" " ဟိတ်…ကောင်မလေး…သူ ပါးစပ်ကြမ်းလာပြီ….." " ကြမ်းမှာပေါ့…. သူက ကြမ်းတတ်လာအောင် လုပ်တာ….." " ဘာလုပ်လို့လဲ…." " ကြည့်….လိုးတာလေ….လိုး..တာ……အဟင့်…." ကြည်နူးပွင့်လင်းသော အသံညှင်းညှင်းလေးများသည် ဧရာဝတီမြစ်ပြင်ကို ရှပ်တိုက်ပြေးလာသော လေပြေလေးနှင့်အတူ အရှေ့ရိုးမဆီသို့ သုတ်ခနဲ လွင့်မျောသွားလေတော့သည်..။ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ပြီးပါပြီ..။ မှတ်ချက် ပြီးပါပြီဆိုသော်လည်း ဇာတ်လမ်းခေါင်းစဉ်အရ ပြီးသေးအံ့မထင်၊ရိုက်တင်ပေးတဲ့ ကိုကောင်းမြတ်ကြီး အပိုင်းပျောက်နေတယ်ထင်ပါ့။ ဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူအောင် ( http://achittatkatho.net)မှကူးယူပြီးPDF ဖိုင်အဖြစ်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါသည်။ Posted by
Lu Soe Gyi
ahMay 19, 2013 at 8:32 PMမိန်းမများကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးနည်းHello Like your mega Big milk.ကောင်မအလန်းလေးတွေဆိုဒီလိုမျိုးမှုတ်ချင်တာ /လိုးနည်းများမမအိုး ရေး ကျနော်ကိုအိုးတလုံးလောက်ပေးပါဦးမမအိုးဆိုလဲရတယ် တခြာအိုးဆိုလဲရပါတယ်တလုံးလောက်ပေါနော်ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်ပေါ်တွင်အမြင်မတော် ထိုသို့ အိပ်စက်အနားယူသောဧည့်သည်စုံတွဲကို...ဘ၀နောင်ရေး စိတ်အေးဖို့ မင်္ဂလာဦး ကို ရွေးကြစိုကရိယာထည့်လို့။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းကလည်း ထူးခြားလာတယ်။ တင်ပိုင်းရဲ့ အောက်ပိုင်းတ၀က်က ဘေးကားလာတယ်။ ရင်သား၊ တင်-တင်ပါး၊ ပေါင်၊ လက်မောင်း၊ ဆီးစပ်နေရာတွေမှာ အဆီစုဝေးလာတယ်။ ဗမာတွေက ခါးသေး-ရင်ချီလို့ ပြောကြတယ်။ ဆေးစာလိုပြောရရင် Waist-hip ratio (WHR) ခါးနဲ့ တင် အချိုးလို့ပြောတယ် အမျိုးသမီးတိုင်း ကရိယာထည့်လို ရုပ်ကမြန်မြန်အိုတယ်အူမတောင့်မှ-သီလစောင့်ကြမယ်ဆိုရင်။ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာရရင်အူမတောင့်ကြမှာလဲ-ဆိုတာမေးစရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ကောင်းပါတယ်-လူဖြစ်လာရကျိုးနပ်အောင်လုပ်နေကြတယ်လို့မြင်မိပါတယ်သတင်းဆိုးများတွင်အတောင်ပန်များရှိသည် သတိထားပါ။ အသက်ရှည်လိုလျှင မာစတာဘေးရှင်း လုပ်တာကို နည်းသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။(မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်တာ နည်းချင်ရင် နိုးဆွမှု ဖြစ်စေတာ မှန်သမျှ ရှောင်ရမယ်။ စိတ်ပါဘဲ။ ဒီအရွယ် ယောက်ျားလေး တွေမှာ တခြားလုပ်စရာတွေက နည်းနေတယ်။ စိတ်ကလည်း ဘာမဆို ထက်သန်တယ်။ ပညာ-ဗဟုသုတ ကလည်း စုံသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ များသောအားဖြင့် မြင်ဆရာကို အားကိုးနေချိန်ဖြစ်လို့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေ အပေါ်မှာလည်း မူတည်သေးတယ်။ ကောင်းတဲ့စာတွေ ရွေးဖတ်ပါ။ အားကစား လုပ်ပါ။အသက်ရှည်လိုလျှင မာစတာဘေးရှင်း လုပ် ကရိယာထည့်လို့။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပုံပန်းကလည်း ထူးခြားလာတယ်။ တင်ပိုင်းရဲ့ အောက်ပိုင်းတ၀က်က ဘေးကားလာတယ်။ ရင်သား၊ တင်-တင်ပါး၊ ပေါင်၊ လက်မောင်း၊ ဆီးစပ်နေရာတွေမှာ အဆီစုဝေးလာတယ်။ ဗမာတွေက ခါးသေး-ရင်ချီလို့ ပြောကြတယ်။ ဆေးစာလိုပြောရရင် Waist-hip ratio (WHR) ခါးနဲ့ တင် အချိုးလို့ပြောတယ်။ တိတိကျကျ ဆိုချင်တာက အကျဉ်းဆုံးခါးက ဘယ်နှစ်လက္မ၊ အကားဆုံး တင်ပိုင်းက ဘယ်နှစ်လက္မ ဆိုတာ တိုင်းထွာပြီး၊ အချိုးချ လိုက်တာပါ။သတို့သမီးကို စစ်သလား ဘယ်သူကမှ မမေးဘူး။ တထောင့်တည ပုံပြင် တခုထဲမှာ သမီးရဲ့ မင်္ဂလာဦးမှာ ဖအေလုပ်သူက အော်တဲ့အသံကို နားစွန့်နေသတဲ့။ မအေက မနက်ကျရင် အိပ်ရာခင်း သွေးစွန်းတာ လိုက်ရှာသတဲ့။ သူများတွေ လက်ညှိုးထိုးမနေနဲ့ ပုဂံခေတ်မှာ ပန်းဦးလွှတ်ထာ မလုပ် မနေရတဲ့။ယောက်ျားနဲ့ ပဌမဆုံး ဆက်ဆံချိန်မှာ သွေးထွက်တာဖြစ်ရင် အပျိုစစ်တယ်။ သွေးမထွက်ရင် အပျိုမဟုတ်ဘူးလို့ မပြောဘဲ အပျိုမြှေး မရှိသူဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာကြတယ်။ အဲဒီသွေးက အပျိုမြှေး စုတ်ပြဲသွားလို့ ထွက်တာကိုး။ တခြားကြောင့် သွေးထွက်တာတွေလဲ ရှိပါတယ်.. (မာစတာဘေးရှင်း) လုပ်၊ ဆေးစစ်တုံးက ကရိယာထည့်လို့။ အသက်ရှည်လိုလျှင် အသည်းကို ညှာတာပါအပျိုစစ် လက္ခဏာဆိုတာတွေကို ဆေးပညာအရ ပြောပါဆိုရင် -ရင်သား၊ တင်းနေမယ်၊ လုံးဝန်းပြီး ဆန့်နိုင်-ကြုံ့နိုင်တယ်၊ နို့သီးထိပ်က မာတင်းတင်း၊ အောက်ခြေ အ၀ိုင်းက ပင်ကိုယ်အသားအရောင် လိုက်ပြီး ပန်းရောင်ကနေ ညိုမဲမဲနေမယ်၊ နိုးသီးအဖျားမှာ ပန်းရောင်အစက်ရှိမယ်၊ယနေအရင်ချွတ်ပြမယ်နံပါတ်(၁) ... အရင်ချွတ်ပြမယ်။ နံပါတ်(၂) ... ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲ .. ဆွမယ်။ နံပါတ်(၃) ... ကိုကိုက လိုးတယ်။ နံပါတ်(၄) ... အကာကွယ်တော့ သုံးကွယ်။ နံပါတ်(၅) ... အိမ်ကိုလာတောင်းပေါ့ရှင် ...။ နောက်ပီးရင်တော့ ဗိုက်မကြီးခင်ပဲ ရွှေလက်တွဲကမယ့် လို အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု တိုက်စားခံရသည့်• မိန်းမကိုယ် အပြင်နုတ်ခမ်းသား လုံးဝန်းပြီး၊ ဆန့်နိုင်-ကြုံ့နိုင်တယ်၊ နုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက် ထိကပ်နေမယ်၊ အတွင်းနုတ်ခမ်းသား နဲ့ မ-အစိတွေကို လုံးဝ ဖုံးအုပ်နေမယ်၊ မနေနိုင်တော့ဘူး အင်းဟင်းဟင်းသူစိတ်တွေထရြွReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:34 PMhttp://sexyluumike.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.htmlhttp://golden-land-myanmar.blogspot.com/http://myanmarsexxx.blogspot.com/http://luyankarr.blogspot.com/2012/09/q-and-over-18-readings-73-1.html?zx=c64e5e9c95b04d2fhttp://loeelaychitthu.blogspot.com/လက်ရှိ မိန်းခလေးတော်တော်များများအသုံးပြုနေသော လီးတံအတုhttp://www.internationalherbaliss.com/2011/07/penis-ikat-pinggang-electrik.htmlလီးအတုကြီး/ အစစ်ဘယ်လောက်အရသာရှိလဲ ပူနွေးမာကျောလှသော လီးကြီး၏သိကြဘူးနဲ့တူတယ်နော်အရာရာကို မေ့သွားစေသည်(သူမသည် လင်မရှိသော အပျိုကြီးဖြစ်သောကြောင့် ယောက်ျားတစ်ဦး၏ အလိုး အဆောင့်၊)ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:35 PMhttp://lutharkyte2.blogspot.com/2011/04/blog-post_22.htmlလူသားကြိုက်: ထိုင်ဝမ်ကကွမ်းယာသည်လေးတွေ....lutharkyte2.blogspot.comhttp://loeelaychitthu.blogspot.com/2012/04/blog-post.htmlဒေါက်တာမုဆိုး http://www.facebook.com/pages/%E1%80%B1%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%AF%E1%80%86%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%B8/612264762133065http://shwekalarma.blogspot.com/2011/10/blog-post_9304.html?zx=59792aac8ea3659http://3.bp.blogspot.com/-ztokR9wf1bA/UXERLmJda_I/AAAAAAAAE8Q/xRnktv8p6vA/s1600/M+M+W7.jpghttp://shwekalarma.blogspot.com/2012/02/blog-post_12.html?zx=d214d0c0613bc82fhttp://lusoegyixxx.blogspot.com/?zx=2bc1ce869fae1187http://shwekalarma.blogspot.com/2011/10/blog-post_9304.html?zx=59792aac8ea3659http://loeelaychitthu.blogspot.com/2012/04/blog-post.htmlhttp://sexylikethu.blogspot.com/2011/02/blog-post_2299.htmlhttp://shwekalarma.blogspot.com/2012_04_20_archive.htmlhttp://shwekalarma.blogspot.com/2012/02/blog-post_12.htmlhttp://sexylikethu.blogspot.com/2011/02/blog-post_2299.htmlhttp://shwekalarma.blogspot.com/2012_04_20_archive.html?zx=8b6ffc6c8a572186http://shwekalarma.blogspot.com/2012/02/blog-post_12.htmlhttp://shwekalarma.blogspot.com/2011_08_05_archive.html?zx=8737c755753c9540http://nyaung4bin.blogspot.com/search/label/%E1%82%8F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%9C%E1%80%BDhttp://nnheinblog.blogspot.com/2011/02/blog-post_2326.html(အမျိုးသားများ လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက် ကာမဆန္ဒ ရှိနေသော်လည်း လိင်တံ မတောင့်တင်းခြင်း သည် )http://nnheinblog.blogspot.com/(သဘာဝပုံလေးတွေပါ)အရမ်းကိုပျော်နေတဲ့မမhttp://egxoiridios.blogspot.com/2011/08/blog-post_9118.htmlhttp://www.dawnmanhon.com/2013/05/blog-post_6111.htmlhttp://www.nyamintharx.net/http://minthantzaww.blogspot.com/2011/11/blog-post_24.htmlhttp://nyaung4bin.blogspot.com/2013/01/blog-post_9281.htmlhttp://bluegyidr.blogspot.com/2013/03/blog-post_5949.html?zx=ff583cd8cd7cc781http://nyaung4bin.blogspot.com/search/label/%E1%80%A1%E1%80%96%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%B6%E1%80%AFhttp://nyaung4bin.blogspot.com/2013/01/blog-post_9281.htmlhttp://www.nyamintharx.net/http://alljapoe.blogspot.com/p/blog-page_4843.html?showComment=1362209143248http://drzawgyie.blogspot.com/2013/04/blog-post_8680.htmlhttp://mmsexystorys.blogspot.comhttp://www.mmsexygirls.com/2011/08/myanmar-model-nwe-nwe-tuns-sexy-outdoor.htmlhttp://ygntharlay.blogspot.com/2012_10_07_archive.htmlhttp://nyamintharlay.blogspot.com/2013/05/blog-post_1877.htmlhttp://mgkyautkhae.blogspot.com/2012/07/blog-post_7492.htmlကျားအင်္ဂါသုံး/ မအင်္ဂါ ကရိယာတွေ(မိန်းမမရသေး။မယူချင်သေးသောလူပျိုကြီးများ၊မိန်းမရှိပြီးမိန်းမနှင့်ဝေးနေသူများလည်းလိုသလိုအသံုးပြုနိုင်ပါသည်)ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:36 PM မြန်မာ နိုင်ငံတွင် သုက်ပိုး မရမ်းကုန်း မြို အဖုတ်မှသုတ်ရည် ပဲငံပြာရည်လိုပဲ ချိုလဲချိုတယ်ှဗဟုသုတရအောင်လို့ပါ..အလာကားမသုံးနဲ့ ရောင်းစားလို့ ရတယ်သုတ်ရည် အလာကားမသုံးနဲ့ ရောင်းစားလို့ ရတယ်ခုခေတ်က အိုင်တီခေတ်ကွဲ့၊ ဒီတော့ ကလေးလိုချင်ရင် အမျိုးသားသုတ်ရည်ကိုဝယ်ပြီး ဒါမှမဟုတ်လဲ လှူထားတာ ရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့ အမျိုးသမီး မျိုးဥနဲ့ပေါင်းပြီး ဖန်ပေါင်းချောင်ထဲထည့်၊ သန္ဓေအောင်မှ သားအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာပေါ့ကွယ်ဗုဒ္ဓ္ဒဘာသာ တအားကြိုက်တယ်ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:36 PM VIP NEWS :လီးကြီးကို ပြည့်တင်းနေတဲ့ နို့အုံနှစ်လုံးကြားထဲထည့်လိုက်ပါတယ်..အရှင်လတ်လတ်နတ်ပြည်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ဖင်ကြီးကြီးဆော်.. စောက်ဖုတ်က ဖောင်းဖောင်းလေး သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။ပလွေရောအပေးပါကောင်းတယ်လိင်တံ အ၀င်အထွက်တိုင်းမှာ ပွတ်တိုက်ပေးနေတဲ့ အတွက် အမျိုးသမီးတွေမှာပြောမပြတတ်တဲ့အထူးစပါယ်ရှယ် သာယာမူမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ဗျာ...မရွေး အရွယ်မရွေး နေရာမရွေး ဒီစိတ်ဟာ တောင်းတတယ် ပြောမပြနိုင်တဲ့ ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:37 PMချိုချိုအောင် တော်တော် များများမှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပြီး၊ တော်တော် များများ ပြိုင်ပွဲ တွေမှာလည်ွးှTitle ဆုတွေ ရရှိထားတဲ့အဝကျယ်နေတာ အောက်ခံကြွက်သားတွေက ချောင်လာ၊ ပျော့လာလာ၊အလှပြင်တာကို ဆေးမစားမီပုံ၊ ဆေးစားပြီးပုံနဲ့တကွ ကြော်ညာတာတွေရှိတယ်။ tone, strength, control ကြွက်သား၊ အရွတ်နဲ့ အရေပြားတွေရဲ့ တင်းအား၊ အင်အား၊ ထိန်းအား၊ ကောင်းအောင် ခွဲစိတ် ပြုပြင်ပေးတာပါ။ဗမာမတွေ ကြာလေရွံဖို.ကောင်းလာလေပဲဗမာမတွေ ကြာလေရွံဖို.ကောင်းလာလေပဲရန် ကုန်မြို့ ကြီး အပါ ၀င် နေရာတိုင်းမှာ မိန်းကလေး အများစု၊ မိမိ ခန္တကိုယ် အသုံးချကျွန်မ အရှက်မရှိဘူးဆိုတာ http://leypyay.blogspot.com/2012/03/blog-post_22.htmlမိန်းခလေများ ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်မိသည်စီးပွား ဒေါ်လာ (၅၈) ရတယ် ..ရေးကျပ်တည်းရာမှ အလုပ်တခါလုပ်ရင် အပျိုကြီး မမတွေ များလာနေပြီတဲ့နော်ပထမတကြိမ် ဖောက်ရင် ဒေါ်လာ (၁၀၀၀)၊ ဒုတိယအကြိမ်မှာ ဒေါ်လာ (၈,၀၀)၊ တတိယအကြိမ်မှာ ဒေါ်လာ (၅၀၀)လောက်ရတယ်။ဒီအလုပ်လုပ်တာ ငွေရလွယ်တယ်ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:39 PMhttp://www.exwifesexbook.com/?wm_login=aidanpost&ps=s&ref_url=http://www.exwifesexbook.com/?wm_login=aidanpost&ps=s&ref_url=http://lutharkyte2.blogspot.com/2011/03/75.htmlbluegyidr.blogspot.com/2013_02_17_archive.html?zx=dcf927a378289ecdhttp://luyankarr.blogspot.com/2011/10/blog-post_8589.html?zx=c05fe42a4996eadaရေမရောတဲ့နို.ချိုချို ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:41 PMရန်ကုန်မြို့ ပိပိက အတော်ကြီးတယ်၊မိန်းမကိုယ်မှ ချောဆီ ဆင်းလာတာဟာလည်း အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အဖြူရည်ဟာ ပျစ်ချွဲချွဲ လိင်ဟော်မုန်း ချိုလဲချိုတယ် တော်တော်အရသာရှိမယ်နော် သဇင်က ရှင်းပြတယ်. စာက်ဖုတ်ကြီးတာထက် နို့ကြီးတာကိုပိုကြိုက်ပါတယ်, ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖူးထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ လုပ်ချင်စရာကြီး၊ အရမ်းစိတ်ထတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြည့်တော့ မကောင်းဘူး။ ကျယ်နေတဲ့အပြင် စောက်ရေတွေကလည်း ကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ လုပ်ချင်စရာကြီး၊ အရမ်းစိတ်ထတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လုပ်ကြည့်တော့ မကောင်းဘူး။ သူတို့ဖင်နံပြားတွေနဲ့များ....ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြရင်တောင် လီးတောင်ပါ့မလား မသိဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မိန်းကလေး အလှအပအတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှု ပိုမိုများပြားလာတစ်နှစ်အတွင်း ရုရှား ပညာရှင်များ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူသူပေါင်း (၁)သန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်နေကြောင်းလည်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာမော်ဒယ်များ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ/ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်း တပ်မတော် ခန်းမတွင် ယနေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်/ လူစိတ်ဝင်စားမှု များပြားစေရန် မော်ဒယ်အင်အား ပိုမို မြန်မာမိုဒယ်များကိုပါ စိတ်ဝင်စားကြသည် အ ဖုတ်ပြပွဲတရုတ်ဘယ်လိုမျိုး 'တင် 'ဘယ်လိုလူမျိုး 'စောက်ဖုတ်'ကပို လိုးလို့ကောင်းပါသလဲခင်ဗျား? တရုတ် 1. ကျောက်ချဉ်ကို အသုံးပြုပုံကတော့ အင်တုံတခု သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ် ဇလုံကြီး တခုထဲမှာ ကျောက်ချဉ် ကို သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ ထည့်ပြီး ပျော်ဝင်သည်ထိ စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ မိမိရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို အဆိုပါ ဇလုံတွင်း ကျောက်ချဉ် ရေဖြင့် တနေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်လောက် စိမ်ပေးပါ။လုပ်နည်းလုပ်ဟန်က အင်မတန် ရိုးစင်းပြီးလွယ်ပေမယ့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကို အမျိုးတော်တော် များများမှာ အခက်အခဲတွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်တာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးပြီး ကျောက်ချဉ်ရေ စိမ်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိ လာမယ့် ရလာဒ်က ကြီးမားလှပါတယ်။ပျိုမေတို့မှသည် သက်ကြီးရွယ်အို အမျိုးသမီးကြီးတွေအထိ အသုံးတည့်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ နည်းလမ်း တခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကျေးကျလည်း အလွန်နည်းပြီး ခက်ခဲမှုလည်း မရှိပါဘူး ..ဗမာမတွေ အပျိုလေး အဝကျယ်နေတာ အောက်ခံကြွက်သားတွေက ချောင်လာ၊ ပျော့လာလာ၊အလှပြင်တာကို ဆေးမစားမီပုံ၊ ဆေးစားပြီးပုံနဲ့တကွ ကြော်ညာတာတွေရှိတယ်။ tone, strength, control ကြွက်သား၊ အရွတ်နဲ့ အရေပြားတွေရဲ့ တင်းအား၊ အင်အား၊ ထိန်းအား၊ ကောင်းအောင် ကျောက်ချဉ် ပြုပြင်ပေးတာပါ။http://nyamintharlay.blogspot.com/2013/05/blog-post_1877.htmlဗမာမတွေ အပျိုလေး အဝကျယ်နေတာ အောက်ခံကြွက်သားတွေက ချောင်လာ၊ ပျော့လာလာ၊အလှပြင်တာကို ဆေးမစားမီပုံ၊ ဆေးစားပြီးပုံနဲ့တကွ ကြော်ညာတာတွေရှိတယ်။ tone, strength, control ကြွက်သား၊ အရွတ်နဲ့ အရေပြားတွေရဲ့ တင်းအား၊ အင်အား၊ ထိန်းအား၊ ကောင်းအောင် ကျောက်ချဉ် ပြုပြင်ပေးတာပါ။http://nyamintharlay.blogspot.com/2013/05/blog-post_1877.htmlReplyDeleteLoad more... ဗမာမတွေ အပျိုလေး အဝကျယ်နေတာနေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်တာ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် အချိန်ပေးပြီး ကျောက်ချဉ်ရေ စိမ်ပေးခြင်းကြောင့် ရရှိ လာမယ့် ရလာဒ်က ကြီးမားလှပါတယ်။ ထည့်ထားရင် ကျေနပ်နေမှာပဲ,မမ ထူးကဲသောအရသာကိုခံစားရလေတော့သည်တခါမှ လည်းဒီ လိုအရသာမျိုး မခံ စားဖူးပါဘူး။ လိုးရသည်မှာ ၂ဦးစလုံးအဖို့ ထူးကဲသောအရသာကိုခံစားရလေတော့သည် သူကသဘောလည်းကောင်းတယ်။လိုးပြီးတော့ ကြောတွေဘာတွေတောင် လျှော့ပေးလိုက်သေးတယ်။XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1. ကျောက်ချဉ်ကို အသုံးပြုပုံကတော့ အင်တုံတခု သို့မဟုတ် ပလပ်စတစ် ဇလုံကြီး တခုထဲမှာ ကျောက်ချဉ် ကို သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏ ထည့်ပြီး ပျော်ဝင်သည်ထိ စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ မိမိရဲ့ မိန်းမကိုယ်ကို အဆိုပါ ဇလုံတွင်း ကျောက်ချဉ် ရေဖြင့် တနေ့လျှင် ၁၅ မိနစ်လောက် စိမ်ပေးပါ။လုပ်နည်းလုပ်ဟန်က အင်မတန် ရိုးစင်းပြီးလွယ်ပေမယ့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကို အမျိုးတော်တော် များများမှာ အခက်အခဲတွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:53 PMhttp://aungthetkhing.blogspot.com/2013/02/blog-post_3703.htmlhttp://loeelaychitthu.blogspot.com/2012_07_01_archive.html(ဆေးမစားမှီ)http://loeelaychitthu.blogspot.com/2012/04/re-size14pt-size-dkmfreedom-myanmar_11.html( အဖုတ် ပြိုင်ပွဲ ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာမော်ဒယ်များ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ/ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်း တပ်မတော် ခန်းမတွင် ယနေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်/ လူစိတ်ဝင်စားမှု များပြားစေရန် မော်ဒယ်အင်အား ပိုမို မြန်မာမိုဒယ်များကိုပါ စိတ်ဝင်စားကြသည်ညှို့မဂ္ဂဇင်းပြီးနောက် ပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် အသွင်တူ ထွက်လာခဲ့သော မာယာမဂ္ဂဇင်း ReplyDeleteahMay 19, 2013 at 8:58 PMhttp://loeelaychitthu.blogspot.com/2012/04/re-size14pt-size-dkmfreedom-myanmar_11.html( အဖုတ် ပြိုင်ပွဲ ယခုနောက်ပိုင်း မြန်မာမော်ဒယ်များ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ/ ရန်ကုန်မြို့ ဦးဝိစာရလမ်း တပ်မတော် ခန်းမတွင် ယနေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်/ လူစိတ်ဝင်စားမှု များပြားစေရန် မော်ဒယ်အင်အား ပိုမို မြန်မာမိုဒယ်များကိုပါ စိတ်ဝင်စားကြသည်..ယောကျာင်္းလေးတွေထောင်ကျတာသူတို့တွေကေကြာင့်ပေါ့ReplyDeleteAdd commentLoad more...
Email ထားခဲ့ပေးပါ အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်
Movie ဒေါင်းရန် ဘော်ဒါ တို့အတွက် အပန်းပြေစေမယ့် Software အလန်းလေး
လူဆိုးကြီးဘော်ဒါတစ်ယောက် သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ Software အလန်းလေး တစ်ခု ပါ၊ အရမ်းမိုက်တယ်၊ စာအုပ်ဖတ်သလိုဘဲ တစ်ရွက်ချင်း လှန်ပြီးတော့ ဖ...
Movie ဒေါင်းရန် မြန်မာစစ်စစ်လေးထင်တယ် (၄)
Movie ဒေါင်းရန် မြန်မာမလေး ရေချိုးနေတာ ချောင်းရိုက်
Movie ဒေါင်းရန် @ urÇmrdef;cav; ဒါကတော့ လူဆိုးကြီး ဆိုဒ်အပြင် တခြားဆိုဒ်တွေပါ ပေါင်းထည့်ပေးထားတဲ့ Apk ပါ
Software ဒေါင်းရန် လူဆိုးကြီးဖေ့ဘုတ် ပါကင်လေးလား
Movie ဒေါင်းရန် မြန်မာကားစစ်စစ် - ၃ အားပေးလိုက်ပါအုန်း
Movie ဒေါင်းရန် ဒါမျိုးရဲရဲလေးကို လွေးချင်တာ
Movie ဒေါင်းရန် DKM
lusoegyixxx007@gmail.com ကို ပို့ပေးနိုင်ပါပြီ
တင်ပြီးသမျှ POST တွေ
ခင်မိမိကို ရဲ့ အလန်းများ
NIBBAN အင်္ကျီလေးနဲ့ပါလား
နန်းသီရိမောင် ရဲ့ ပုံသစ်လေးတွေပါ
ဆိုင်မန်နေဂျာ မသိမ့် တဲ့
Star Focus Online Magazine
တင်ထားသမျှတွေကို ရှာဖွေ ကြည့်မယ်
လူဆိုးကြီး cbox တွင် ပြောဆိုခြင်းမရှိပါ
Widget by :စိတ်အမောပြေ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင် Website များ ဒီမှာ ကြော်ငြာရယူပါ
Lu Soe Gyi. Watermark template. Powered by Blogger.